आस्था राउत र प्रहरीबीच विमानस्थलमा भएको थियो यस्तो लफडा, हेर्नुस सिसिटिभी फुटेजसहित — Sanchar Kendra
आस्था राउत र प्रहरीबीच विमानस्थलमा भएको थियो यस्तो लफडा, हेर्नुस सिसिटिभी फुटेजसहित
काठमाडौं । गायिका आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको प्रहरी चेकिङ र त्यहाँ भनिएको ‘दु’र्व्य’वहा’र’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बुधवार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा महिला प्रहरीले आफूमाथि दु’व्य’र्व’हार गरेको आरोप लगाउँदै सामाजिक संजाल फेसबुक लाइभमार्फत प्रहरीलाई गा’ली गरेपछि आस्था राउत चर्चासँगै विवादमा तानिएकी छिन् ।
उक्त लाइभमा गायिका राउतले प्रहरीलाई प्रहरी मेरो साथी भन्ने ‘स्लोगन’ हटाउन भन्दै प्रहरीमाथि खरो टिप्पणी गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीलाई गा’ली गर्दै राखेको भिडियो उनले हटाएकी थिइन् । बुधवार उनी भारतको सिक्किममा हुन लागेको रिम्बी मेलामा आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि भद्रपुर जाँदै थिइन् ।
तर राउतको टिप्पणीमाथि नै धेरैले आपत्ति जनाएपछि राउतले आवेशमा आएर अपशब्द बोलेको भन्दै माफी मागेकी थिइन् । तर पनि उनले साना प्रहरीहरुलाई ‘म्यानर’ सिकाउन भन्दै ठूला प्रहरी अधिकारीलाई ‘सुझाव’ दिएकी थिइन् । आखिर आस्था राउतमाथि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा चेकिङमा भएको चाहिँ के थियो त ?
१ मिनेट ४५ सेकेण्ड लामो भिडियोमा सुरुमा आस्था राउत र अर्का एक युवक सँगै आउँछन् । युवक पुरुषको लाइनमा चेकजाँचका लागि जान्छन् भने राउत महिला प्रहरी भएकोतिर आउँछिन् । महिला प्रहरी रमिशा श्रेष्ठ चेकजाँचमा थिइन् । राउतको हातमा कफीसमेत थियो । महिला प्रहरीले राउतलाई ज्याकेट खोलेर आउन भन्छिन् । बरु राउतको हातमा रहेको कफीसमेत महिला प्रहरीले लिइदिन्छिन् र टेबुलमा राखिदिन्छन् । त्यसपछि राउत रिसाउँदै बाहिर जान्छिन् र आफ्नो ज्याकेट खोली एक्सरे मेसिनमा राख्छिन् । त्यसपछि राउत प्रहरी चेकिङमा जान्छिन् । महिला प्रहरीले राउतको शरीर खानतलासी गर्छिन् । त्यसपछि पनि राउत रिसाएर आफ्नो ज्याकेट लिन जान्छिन् ।
राउत निस्कन लागेपछि महिला प्रहरीले कफी लैजान भन्छिन् । तर उनी कफी नलिई निस्कन खोज्छिन् । महिला प्रहरी आफैले कफी ल्याएर दिन्छिन् । तर पनि उनी अझै रिसाएर निस्कन खोज्छिन् । त्यसपछि महिला प्रहरीले राउतको ज्याकेट समातेर फेरि पनि कफी लैजान भन्छिन् । तर, राउत कफी लैजान मान्दिनन् । त्यसपछि केही समय महिला प्रहरी र राउतबीच कफी टेबलमा सारासार हुन्छ ।
राउतले आफ्नो ज्याकेट लगाउँछिन् र ब्याग बोकेर कफी नलिई जान खोज्छिन् । त्यसै क्रममा राउतले महिला प्रहरीमाथि नै औँला ठड्याएर केही बोल्छिन् । राउतको हाउभाउ हेर्ने हो भने त्यो धम्कीजस्तो देखिन्छ । राउतले औँला ठड्याएर धम्की दिँदा पनि महिला प्रहरी चुपचाप आफ्नो काम गरिरहन्छिन् । ज्याकेट लगाइसकेपछि राउत कफी नलिई त्यहाँबाट निस्किन्छिन् ।
भिडियोकै बीचमा हेर्ने हो भने करिब ५ वर्षकी एक बच्चीले आफ्नो ज्याकेट खोलेर एक्सरे मेसिनमा राख्छिन् र शरीर चेकजाँच गराउँछिन् । अनि चेकजाँच सकिएपछि आफ्नो ज्याकेट लगाउँछिन् र बाहिर निस्किन्छिन् । विमानस्थलमा यस्तो चेकजाँच सामान्य प्रक्रिया हो ।
कुनै कलाकार वा ठूला व्यक्तित्व हुँदैमा शरीर चेकजाँच नगर्ने भन्ने हुँदैन । महिला प्रहरीले आफ्नो नियमित काम गरेकी थिइन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार महिला प्रहरीले नभएर राउतलेचाहिँ महिला प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेकी थिइन् । ‘मलाई चिन्दैन, म को हुँ ? मेरो चेकिङ्ग गर्नुपर्छ र?’ भनेर राउतले उल्टै विवाद गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
गायिका आस्था राउतले फेसबूक लाइभमार्फत नेपाल प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रहरीलाई नै गाली गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कतिले आस्थाको समर्थन गरिरहेका छन् भने कतिले उनी यसरी आक्रोशपूर्ण रुपमा प्रस्तुत हुन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यता राउतले भने आफूले ‘हद’ पार गर्ने गरी अपमान सहनु परेकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । यतिबेला उनी भारतको सिक्किममा कार्यक्रमका लागि पुगेकी छिन् । सिक्किममा हुने रिम्बी माघे मेलामा प्रस्तुति दिन आस्था बुधवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन् ।
खबरहबसँगको कुराकानीमा राउतले भनिन्, ‘मलाई ती महिला प्रहरीले हातले तानेर न्याँकिन्, नराम्रो व्यवहार गरिन्, चित्त दुख्यो ।’ आफूले यसअघि पनि प्रहरीबाट सामान्य दुव्यर्वहार बेहोर्नुपरे पनि यो तहको दुर्व्यवहार कहिल्यै नभोगेको बताइन् । महिला प्रहरीले हातै हालेर दुर्व्यवहार गर्दा डिउटीमा रहेका अन्य प्रहरीले टुलुटुलु हेरेको देख्दा दु:ख लागेको उनले बताइन् ।
‘भोलि (शुक्रवार) को कार्यक्रमका लागि म सिक्किम जाँदै थिएँ, हिजो (बुधवार) दिउँसो १२ बजेको फ्लाइट थियो, म समयमै पुगेकी थिएँ,’ राउत खबरहबसँगको कुराकानीमा भन्छिन्, ‘बुद्ध एयरको फ्लाइट ‘डिले’ हुने भएपछि म विमानस्थल परिसरमै कफी पिएर बसिरहेकी थिएँ ।’
‘त्यही बेला मिस आस्था राउत भनेर बोलाइरहेको सुनेँ, म त २ बजे फ्लाइट भनेर ढुक्कले बसिरहेकी थिएँ, बुद्ध एअरका कर्मचारीले बोलाएको सुनेपछि म हतार–हतार चेकिङतिर लागें,’ उनले भनिन् । आफू कफी बोकेरै चेकिङतर्फ अगाडि बढेको तर चेकिङमा रहेकी महिला प्रहरीले आफूलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको आस्था बताउँछिन् ।
आफूले राम्रोसँग सोधे पनि ती महिला प्रहरीले ‘ज्याकेट खोल्’ भन्दै रुखो व्यवहार गरेको आस्था सुनाउँछिन् । दुई दिनअघि पोखरा जाँदा त्यसरी ज्याकेट खोल्नु नपरेको तर हिजो जबरजस्ती ज्याकेट खोल्न लगाउँदा आफूले सहजै ज्याकेट खोलेको आस्था बताउँछिन् । ‘दुई दिनमै ज्याकेट खोल्नुपर्ने नियम शुरु भएछ,’ उनी भन्छिन् ।
महिला प्रहरीले ‘ज्याकेट खोल्’ भनेर रुखो व्यवहार गरेपछि आफू ज्याकेट खोलेर चेक गर्न दिएको पनि आस्था बताउँछिन् । त्यतिबेलासम्म हातमा भएको कफी ती महिला प्रहरीले कतै राखिदिएको र आफूले हतार भएका कारण कफी छोडेरै जान लागेको उनले बताइन् ।
‘उहाँको व्यवहारले मलाई रिस उठिसकेको थियो, तै पनि मैले संयमता अपनाएकी थिएँ, अगाडि जान लागेकी थिएँ,’ आस्था अगाडि थप्छिन्, ‘तर उहाँले ठाडो भाषामा तेरो कफी लैजा भन्नुभयो, मैले पनि लान्न भनेँ ।’
त्यतिबेलै आफूलाई बोलाउन आएका बुद्ध एयरका कर्मचारीले ती महिला प्रहरीलाई कानमा केही भनेपछि बल्ल भित्र छिर्न दिएको आस्था बताउँछिन् । ‘त्यो हदसम्मको दुर्व्यहार मैले भोग्नुपरेको थिएन, मेरो त दिमाग नै आउट भयो,’ उनी गुनासो गर्छिन् ।
त्यतिबेला त्यहाँ भएका अन्य प्रहरीले टुलुटुलु हेरेको आफूलाई चित्त नबुझेको आस्था बताउँछिन् । उनका अनुसार अरु यात्रीले पनि त्यो दृश्य देखिरहेका थिए । प्रहरीको तल्लो तहमा पनि ‘स्कूलिङ’ र नैतिक शिक्षाको जरुरी भएको आस्थाको भनाइ छ । ‘माथिको अफिसरले तल्लो तहको प्रहरीलाई यस्तो व्यवहार गर्न सिकाउने त पक्कै होइन होला,’ उनी भन्छिन् ।
‘प्रहरीका बारेमा नकारात्मक कुरा सुनिन्थ्यो, तर मैले हिजो जे भोगें, त्यसपछि मैले आफूले भोगेजस्तो सुनेर हुन्न रहेछ भन्ने बुझेँ,’ आस्था थप्छिन्, ‘मैले जुन व्यवहार भोगें, त्यो साँच्चिकै दुःखद् थियो ।’ प्रहरीले अपराधीलाई पनि नगर्ने व्यवहार आम नागरिकलाई गरेको महसुस भएको उनको भनाइ छ ।
साढे १२ बजे उड्ने भनिएको प्लेनलाई ट्राफिक जामका कारण ३ बजेसम्म काठमाडौं विमानस्थलमा कुर्नुपरेको थियो । उनका अनुसार भित्र छिरिसकेपछि ‘रन वे’मा समेत प्लेन रोकिएको थियो । भद्रपुर विमानस्थल पुग्दा ४ बजिसकेको थियो । यतिबेलासम्म पनि राउतको रिस मरेको थिएन ।
‘जिन्दगीमा पहिलोपटक त्यत्रो मान्छेको अगाडि त्यसरी दुर्व्यवहार सहन परेपछि कसरी रिस मर्छ?,’ आस्था प्रश्न गर्छिन् । माघे संक्रान्तिको शुभकामना र सिकिम्ममा आयोजना गरिएको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन मात्र ‘लाइभ’ आएको तर विनाकसुर कसैले ज्याकेटमै समाएर अपराधीलाई झैँ गराएको सम्झेपछि एक्कासी रिस उठेको आस्था सुनाउँछिन् ।
‘हामीलाई सम्मान चाहिएको होइन तर कलाकारलाई त यस्तो व्यवहार हुन्छ भने अरुलाई कस्तो होला भन्ने मुख्य प्रश्न हो,’ राउत भन्छिन्, ‘प्रहरीले पनि त्यही कुरालाई राम्रोसँग किन नभन्ने? हामीले गाली नै खानुपर्ने?’ आफूले प्रशासन र प्रहरीलाई सधै सम्मान गर्ने तर केही प्रहरीले गर्दा सबै प्रहरीको छवि नै बिगारिरहेको उनी सुनाउँछिन्, ‘मैले मात्र होइन, हरेक मान्छेले प्रहरीले गर्ने व्यवहारबारे आत्ममूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।’
भिडियोमार्फत प्रयोग गरिएका केही शब्दलाई लिएर धेरैले गुनासो गरेपछि आफूले भिडियो हटाएको आस्था सुनाउँछिन् । सल्यानमा कार्यरत एक प्रहरी जवानले आस्थालाई म्यासेजमा लेखेका थिए – संवाद अथवा वादविवाद एउटा सामान्य विषय हो । तपाईंलाई डिउटीमा रहेको दुर्व्यवहार मेरो लागि पनि स्वीकार्य छैन । कारवाही हुनुपर्छ । त्यसमा मेरो पनि जोडदार माग छ । तर तपाईंले बोलेका शब्दहरुले पनि तल्लो तहको मनोबल कमजोर गरेको छ । आस्था जी, प्युसो, डन्ठेजस्ता शब्द प्रयोग नगरी सम्मान गरेको भए राम्रो हुने थियो । सभ्य भाषामा भनेको भए राम्रो हुने थियो ।
आफूले भिडियोमा प्रयोग गरेका केही शब्द प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई पनि लागेको र माफी मागिसकेको आस्थाले बताइन् । ‘गलतलाई गलत नभने के गर्नु, यस्तो व्यवहार खेपेँ भनेर जीवनभर कुण्ठा बोकेर त म सक्दिनँ नि, त्यसैले बोलेँ,’ उनी भन्छिन् । भिडियो रातोपाटीबाट ।